April 14, 2021 198
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह यतिवेला भारत भ्र`मणमा छन् । उनी अहिले हरिद्वार महाकु`म्भको निम्तो मान्न भारत पुगेका हुन् । पूर्वराजा ज्ञा`नेन्द्रले मंगलवार महाकुम्भ मेलामा शाही स्थान गरेका छन् । उनलाई मंगलवार पनि शाही स्नानका लागि लैजाँदा रथारो`हण गरिएको थियो । उनलाई भार`तमा राजाकै हैसियतमा भब्य स्वागत र सम्मान गरिएको छ ।
विभिन्न धार्मीक स्थलको अवलोकन भ्रमण`मा रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र आइतवार हरिद्वार पु`गेका छन्।कोरोना महामारीका बीच भएको महाकुम्भ मेलामा लाखौं नागरिक जम्मा भएका छन् ।भा`रतमा भएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको बाबा रामदे`वसंग तस्बिर सार्वजनिक भएको छ । तस्बिरमा बाबा रामदे`वले गाडी चलाएको र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अगाडीको सिट`मा बसेको देख्न सकिन्छ ।
एउटै गाडीमा अन्य साधु`हरु उनीहरुका प`छाडीको सिटमा बसेको देखिएको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले भारतमा त्यहाँका ऋ`षीमुनीहरुसंग पनि भेटघाट गरेका छन् ।त्यहाँ उनलाई नि`रञ्जनी अखडा`का सन्तहरुले भव्य स्वागत गरेको भारतीय मिडि`याले जनाएका छन्। निरञ्जन पीठाधीश्वार कैला`शानन्द गिरीको निमन्त्र`णामा भारत गएका उनले हरिद्वा`रस्थित दक्षिण`काली मन्दिरमा पूजा अर्चना गरेका छन्।
त्यस`लगत्तै ज्ञानेन्द्रले सन्तहरु र महा`मण्डलेश्वरसँग भेटघाट गरे। उनलाई भारतले दिएको सम्मानको नेपालमा पनि चर्चा भएको छ । नेपा`लमा पूर्वराजा बनेका ज्ञानेन्द्र`लाई राजाकै हैसियतमा भा`रतले दिएको सम्मा`नको चर्चा भएको हो ।पीठा`धीश्वर गिरीका अनुसार ज्ञानेन्द्रले भोलि शाही स्नान गर्नेछन्। सोमवार हरिद्वारको अप`ररोडमा कुनै पनि सवारीसाधन चल्नेछैनन्। सोमवार र त्यसको दुई दिनपछि महाकुम्भमा शा`ही स्नान चल्नेछ। – ताजा खबर
Prevआज नयाँवर्षको पहिलो दिन, तपाईंको आजको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नु`होस्
Nextसेलीब्रेटीको हर्कत: बच्चा`लाई दूध पिलाउँदै रेड`वाइनमा मस्त भए`पछी…
नेपालका कुन प्रदेशमा कति संक्रमित छन् ? हेर्नुहोस्